TestFlight ho an'ny macOS azo alaina ao amin'ny Mac App Store | Avy amin'ny mac aho
TestFlight ho an'ny macOS azo alaina ao amin'ny Mac App Store
Ignatius Room | | Mac App Store, Programa Mac
Izahay mitondra taona maro, fa tsy volana maromaro, momba ny mety hisian'ny sehatra TestFlight azo amin'ny iOS, azo alaina ho an'ny Mac. Ny fanamafisana ofisialy ny fandefasana TestFlight ho an'ny macOS nitranga tamin'ny WWDC 2021. Nanomboka teo, Apple dia namoaka betas isan-karazany amin'ity fampiharana ity ary efa misy ao amin'ny Mac App Store mandritra ny ora vitsivitsy.
Miaraka amin'ny TestFlight, afaka misoratra anarana ny mpampiasa misintona sy mametraka rindranasa beta ho an'ny iOS, watchOS, tvOS ary ankehitriny koa ho an'ny macOS. Afaka manasa mpitsikilo beta hatramin'ny 10.000 isaky ny fampiharana ny mpamorona ary manolotra ny fahafahana mamorona vondrona hanandrana fananganana samihafa miaraka.
Ao amin'ny famaritana ny fampiharana dia afaka mamaky isika:
Miaraka amin'ny TestFlight, mora ny mitsapa ny dikan-beta amin'ny rindranasa macOS ary manome valiny sarobidy ho an'ny mpamorona alohan'ny hamoahana ny rindranasany ao amin'ny App Store. Mahazo fanasana avy amin'ny mpamorona amin'ny alàlan'ny mailaka na rohy ho an'ny daholobe ny mpanandrana.
Rehefa manandrana fampiharana amin'ny beta ianao, Apple dia manangona ny tatitra momba ny bug, ny fampahalalana momba ny fampiasana, ary ny valin-teny omenao ary mandefa azy ireo any amin'ny mpamorona. Ny mpamorona dia afaka mampiasa ity fampahalalana ity mba hanatsarana ny fampiharana azy sy ny vokatra mifandraika amin'izany. Ho setrin'izany, Apple dia mety hampiasa tatitra diso sy fampahalalana momba ny fampiasana hanatsarana ny vokatra sy serivisy.
Raha mila torolalana momba ny fametrahana, fitsapana, ary fanomezana valiny, ary raha mila antsipiriany bebe kokoa momba ny fomba fitantanana ny angonao, jereo testflight.apple.com.
Ny fotoana voalohany nampidirana ny TestFlight tao amin'ny sehatra developer an'ny Apple dia amin'ny faran'ny aogositraNa izany aza, 2 volana mahery no mbola tsy vita vonona ny handeha ny lampihazo.
TestFligt dia misy ho anao misintona maimaim-poana amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » TestFlight ho an'ny macOS azo alaina ao amin'ny Mac App Store
Podcast 13 × 10: Manomboka ao amin'ny Apple ny Krismasy
Apple TV + dia nanao fifanarahana vaovao tamin'ny orinasa mpamokatra Meadowlark Media